Cabin-pataloha miaraka amin'ny Snap
Ny Sarona Nylon
Azo antoka ny fehikibo
Fampiasana fonon-tànana amin'ny landihazo
Manomboka ny Band Glove
Fihaonambolana sy ny lanon-tanana
SPA pataloha / kiraro
Malouka Velcro Glove
Miaro amin'ny fonon-tanana ny fiarovana
Fehilasy akanjo vita amin'ny landihazo
Manome toky ny akanjo maimaimpoana
Volon-tanana sy ny volon-tanana
Hikasika ny fonon-tànana fonon-tànana
Côlôbra vita amin'ny landihazo
Ny fonon-tanana Nylon Embroidery
Congratulation! Izahay HONGMEIDA GLOVE dia mahazo ny taratasy fanamarinana ny ISO9001, IS024001, ISO45001, ampio izahay hanatsara ny toerana anaovanay fifaninanana.
Ny fifindran'ny covic-19 - mitafy ny fonon-tànana vita amin'ny landihazo amin'ny fanoherana ny fihanaky ny viriosy
Ilaina ve ny manao pataloha fonon-tory mandritra ny fotoana fampielezana COVID-19?
Betsaka ny tsaho sy teti-dratsy momba ny dimy G izay efa tany ivelany vao haingana. Orinasa Britanika iray dia nanangana vokatra iray izay mitaky dimy G ny fahavoazana, ary ny vokatra dia mety hanaparitaka ny 5 G amin'ny fahavoazana. Ny vokatra dia manana anarana "mangatsiaka" -— "5 GBioShield" (ampinga 5 biolojika) Fa ...
Ny fahafatesan'ny afrikana-amerikanina nataon'ny polisy fotsy iray nandohalika nanerana ny firenena
Tato ho ato, ny fahafatesan'ny afrikana-amerikana iray nataon'ny polisy fotsy iray nandohalika nanerana ny firenena. Nipoaka ny fihetsiketsehana tany Minnesota, Kalifornia ary toerana hafa, ary nisy aza ny olona nandrehitra ny sainam-pirenena amerikana teny an-dalana. George Floyd (George Floyd), afrikanina tokony ho 44 taona ...
Ny olona sasany dia mieritreritra fa ny fonon-tanana ara-dalàna dia mafana hatrany ary tsy misy na inona na inona hiadiana amin'ny otrikaretina, "Mahasoa ny mitafy ny fonon-tànana vita amin'ny landihazo mba hisorohana ilay otrikaretina". Vao haingana, ny manam-pahaizana avy any Etazonia dia manome antsika ny valiny: tena zava-dehibe ny hitafy ny fonon-tanana, ho an'ny fitaovana amin'ny fonon-tanana, ny fonon-tanana dia ilaina, fa ...
Ny loza nampidirana an'i Zhang Zhoubin dia nampiditra fa ao amin'ny tontolo iainana isan-andro, ny finday, telefaona, totozy ary fitendry, jiro fandrindrana, gripo, kitapo ary varavarana matetika no voakasiky ny olona, ​​saingy ny toe-pahadiovana matetika dia tsy raharahivina, ka hiteraka tsy mivantana. fifindrana r ...
HONGMEIDA fonon-tanana dia orinasa vita amin'ny fonon-tsarok'aretina ISO9001 Quality Accredited, natsanganay tamin'ny 2000, taorian'ny fananganana sy fanavaozana mitohy 20 taona mahery, ny HMD GLOV dia lasa orinasa lehibe fonosana be indrindra any Avaratr'i Shina, Ny orinasa kami manana mpiasa mihoatra ny 800, ary maro hafa milina 1000 ...
Adiresy:No. 553 Làlana Taihua, distrika XinHua, Shijiazhuang Hebei, Sina
Fotsy malemy, Sarotra Cavy matevina, Ankizy fotsy fonon-tanana, Fandraisana telon-tanana, Cana-Cantél, Fehin-tànana kapoaka fotsy fotsy,